Meizu M5, falanqeyn iyo ra'yi | Androidsis
Waxaa jira soosaarayaal sida Meizu inay maareynayaan inay helaan boos ay ka helaan suuq sida ay u buuxsameen sida taleefoonka iyagoo soo bandhigaya taleefano aad u dhameystiran oo ku saabsan qiimaha burburka.
Waxaan horay u tijaabinay xalalkooda qaar, sida Meizu M3 note, hadda waa markiisa Meizu M5, baaxadda gelitaanka ee aad ka heli karto 150 euro ah Amazon.
2 Astaamaha farsamada ee Meizu M5
4 Gallery sawirro laga qaaday Meizu M5
Kahor intaanan bilaabin kahadalka naqshada, waxaan rabaa inaan cadeeyo hal shay: Meizu M5 wuxuu aad ugu egyahay iPhone 5c. Taasi waa xun? Maya gabi ahaanba, xitaa waxaan u arkaa inay tahay mid lagu daray dadkaas raadinaya bedelida xalka Apple.
Soo saaraha Shiinaha ayaa doortay a naqshad caadi ah xagga hore, leh hal badhan oo shaashadda hoostiisa ah oo ku dheggan dareeraha sawirka faraha iyo in sidoo kale ay u adeegto in lagu maro marinka iyadoo la adeegsanayo tilmaam.
Marka laga hadlayo agabka, waxay umuuqataa in M5 uusan laheyn wax galaas difaac ah, laakiin waxa aan ugu yaraan ku xaqiijin karo 2.5D geesaha wareegsan si aad u siiso rafcaan aan la inkiri karin aaladda isla markaana hagaajiso taabashada.
Taleefanka dheh waa arrin raaxo leh oo fududSi aad uhesho shaashad 5.2-inji ah, waa terminal si caddaalad ah loo maareyn karo, miisaankeedu yahay 138 garaamna wuxuu ka dhigayaa Meizu M5 inuu si aad ah ugu dhaco gacanta.
Badhannada dhinacyadu waxay bixiyaan safar wanaagsan, qaybta hore sifiican ayaa loogu isticmaalay inay ahaato heer soo-gal ah guud ahaanna waxay u hogaansan tahay waxa laga filayo taleefan aan gaarin 150 euro.
Astaamaha farsamada ee Meizu M5
Nidaamka hawlgalka Android 6.0 oo ka hooseeya is-dhexgalka adeegsadaha gaarka ah ee Flyme
Screen 5.2 "IPS oo leh xallinta HD
Gacaliye MediaTek MT6750
RAM 2GB oo RAM ah
Kaydinta gudaha 16 GB lagu ballaarin karo iyada oo loo marayo booska kaarka xusuusta
Kaamirada gadaal 13 mpx sensor oo leh Flash Flash
Kaamirada hore 5 Dareere Mpx
Xuduudaha kala duwan 4 jiilka xiga LTE - 2 × 2 Wi-Fi MIMO (2 anteenooyinkooda) oo loogu talagalay caymiska xawaaraha sare leh - Bluetooth - GPS iyo aGPS - OTG - Micro USB port
Tilmaamo kale Dareenka faraha
Batariga 3070 Mah
Cabbirada 147.2 x 72.8 x 8 mm
Peso Gram 138
Qiimaha 150 euro at Amazon
Farsamo ahaan waxaa na horyaalla taleefan heer-gal ah. Mar dambe Qaabeyntaada annaga waxay u oggolaan doontaa cayaaraha dhaqaaqa ama codsiyada aan u baahnayn ilaha badan laakiin haddii aan rakibno ciyaar si caddaalad ah u jareysa, taleefanka ayaa awood u leh inuu dhaqaajiyo, laakiin qaab aan dheecaan badan lahayn. Aynu xusuusnaano in terminaalkani u adeegi doono si dhammaystiran si loo daboolo baahiyaha isticmaale kasta ee doonaya taleefannada casriga ah ee ka dhex wareegaya internetka, shabakadaha bulshada isla markaana siinaya adeeg aad u caadi ah.
Muuji awooddeeda 3.070 mAh batteriga. Imtixaannadii aan qaadi jiray muddadii aan tijaabiyay terminalkan waxaan awooday inaan xaqiijiyo in shaki la'aan qaybtani ay tahay tan ugu xiisaha badan Meizu M5.
Telefoonku wuxuu socday laba maalmood markii aan u isticmaalay si dhexdhexaad ah iyo maalmahaas oo aan ugu baahnaa inaan wax badan ka soo tuuro M5, suurtagal ahaan, wuxuu igu soo gaadhay maalin iyo badh dhibaato la'aan. Dabcan, ma laha calaamadda amar deg deg ah, in kasta oo leh is-maamul-wanaagsanaan wanaagsan, haddana ma mudna in laga walaaco dhinacaas.
Meizu ma uusan dooneynin in qiimaha uu aad ugu kordho M5-keeda cusub, sidaa darteed qeybaha qaarkood waxay ahayd waqtigii laga saari lahaa maqaska, midkoodna wuxuu ahaa shaashadda. Tan awgeed waxay go'aansadeen inay doortaan a guddi dareeraha, oo leh tayo wanaagsan oo xaqiijinaya khibrad isticmaale wanaagsan, ka hortagga qiimaha qiimayaasha cirka isku shareeraya.
Tan awgeed, soo-saaraha ayaa doortay guddi 5.2-inji IPS iyo xallinta HD720p, oo leh pixels 282 halkii inji taasna waxay leedahay qeexitaan wanaagsan iyo cadaan tayo sare leh. Guud ahaan, midabadu waxay umuuqdaan kuwo dabiici ah, laakiin madowgu aad uma qoto dheeryahay gaar ahaanna dhalaalka, aad bey u yartahay fikirkeyga, wuxuu culeyska saarayaa khibrada isticmaalaha xoogaa, gaar ahaan maalmaha qorraxdu aadka u kulushahay.
Ma iloobi karno dareemaheeda faraha kaas oo bixiya waxqabad aad u wanaagsan oo loogu talagalay qiimaha qiimaha Meizu M5 ay ku socoto. Faraha badanaa si dhakhso leh ayaa loo aqoonsaday, in kastoo aan dhaho in kabadan hal jeer waa inaan farta saaray dhowr jeer, laakiin ma jiraan wax aan caadi aheyn taleefan si aad uga bilowdo koonka Android.
Dabcan, is dhexgalkiisu wali aniga ima jecla. Waana in Flyme OS uusan aheyn Android. Mana u dhowaanayso khibrada isticmaale. Waayahay, fikradda ah in la isticmaalo dareeraha sawirka halkii aan ka isticmaali lahaa badhamada awoodda leh ee aan jeclahay, laakiin xaqiiqda ah in lakabka caado ee soo saaraha Aasiya uu aad uga fog yahay wixii aan u barannay waa mowduuc aanan aad u jeclayn. Waa maxay sababta ay u waalan tahay u ekaanshaha iPhone?
Flyme ma leedahay waxyaabo wanaagsan? Sida iska cad haa oo markaad la qabsato waa nidaam si dhameystiran u dhameystiran oo ay ku jiraan faahfaahin aad u xiiso badan. Laakiin uma muuqato sida terminal-ka Android. Sida ugu fudud ee.
Ugu dambayntii waxaan ka hadlayaa arrimaha ku saabsan Kaamirooyinka Meizu M5. Marka horeba, terminal-ka wuxuu leeyahay kaamirada hore 5-megapixel, marka lagu daro 13-megapixel camera gadaal ah.
Muuji taas interface kamaradda Meizu M5 waxay leedahay tiro wanaagsan oo xulashooyin ah, oo ay ku jiraan habka ugu muhiimsan ee xirfadleyda ah ee noo oggolaanaya inaan gacanta ku habeynno xuduudaha terminal kala duwan sida dheelitirka cad ama qoto dheer.
Taleefanka ayaa sameeya sawiro hufan, laakiin faan la'aan badan. Goobaha iftiinka wanaagsan waxaan ku qaadi karnaa tallaallo la aqbali karo, oo leh midabbo cadcad oo fiiqan, in kastoo aadan ka fileynin tayo aad u ballaaran.
Marka habeenku soo galo ama ku isticmaal kamarada guriga dhexdiisa isla markiiba waxaad arkaysaa in dhawaqa laga baqo uu muuqdo iyo in tayada captruas-ka ay si weyn hoos ugu dhacday, taas oo si cad u sheegaysa in kamaradda Meizu M5 aysan ahayn barta ay ku xoogan tahay, kana fog tahay. Dabcan, waxay kaa saari doontaa wax ka badan hal deg deg ah.
Gallery sawirro laga qaaday Meizu M5
Waxaan wajaheynaa taleefan heer-gal ah oo bixiya waxyaabo aad u xiiso badan, gaar ahaan taas naqshad soo jiidasho leh, una ismaamul aan dhamaan iyo a sshidma faraha, wax adag in laga helo meelaha laga soo galo.
Kaamiradu ma ahan tan ugu fiican suuqa, laakiin waxay kaa saari doontaa dhibaato badan. My real laakiin? Flyme, habeyn aad u ballaaran oo ka duwan Android taas Waxay umuuqataa inaan wajaheyno terminal aan isticmaalin nidaamka howlgalka Google.
Naqshad soo jiidasho leh
Kaamirada ayaa xoogaa dhutineysa
Flyme way ka fogtahay Android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu M5, falanqeyn iyo ra'yi